Warshad Shiraac - Soosaarayaasha Shiraaca Shiinaha, Shirkado Alaab-qeybiyeyaal ah
Waxaan si joogto ah u fulinnaa ruuxeena '' Cusbooneysiinta keeneysa horumar, tayo sarreysa hubinta quudka, Maareynta kor u qaadista faa'iidada, Dhibcaha macaamiisha soo jiidaneysa ee Canvas,,,, Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa inaad na soo booqato. Waxaan rajeyneynaa inaan yeelanno wadashaqeyn wanaagsan mustaqbalka. Iyada oo ay taageerayaan koox farshaxan ah oo xirfad leh oo IT ah, waxaan ku siin karnaa taageero farsamo oo ku saabsan iibka kahor & adeegga iibka kadib ee loogu talagalay Canvas, Si aad uga faa'iideysato ilaha macluumaadka faafa ee ganacsiga caalamiga ah, waan soo dhaweyneynaa wax ka iibsada meel kasta khadka iyo khadkaba. In kasta oo ay jiraan xalal tayo wanaagsan leh oo aan bixinno, adeegga wadatashiga wax ku oolka ah ee qanciya waxaa bixiya kooxdayada adeegga khaaska ah ee iibka kadib. Liisaska alaabada iyo xuduudaha faahfaahsan iyo wixii macluumaad kale ah ee weil ayaa laguugu soo diri doonaa adiga waqtiga ku habboon su'aalahaaga. Marka fadlan nala soo xiriir annaga oo noo soo diraya emayl ama na soo wac haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid shirkadeena. ou sidoo kale waxaad ka heli kartaa macluumaadka cinwaankeena boggayaga oo aan u nimid shirkadeena si aan u helno sahaminta duurka ee badeecadeenna. Waxaan kalsooni ku qabnaa in aan wadaagno wax wada qabsi iyo in aan abuuro xiriir iskaashi oo xoog leh saaxiibbadeenna ku dhex jira suuqan. Waxaan raadineynaa weydiimahaaga.
Canvas waa dhar aad u culus oo si caadi ah loo tolay oo loo isticmaalo sameynta shiraacyada, teendhooyinka, maraakiibta, boorsooyinka dhabarka, iyo waxyaabaha kale ee loo baahan yahay in lagu adkeysto.
Waxaa sidoo kale caan ku ah farshaxan-yahannadu inay u isticmaalaan dusha rinjiyeynta, oo sida caadiga ah ku fidsan loox alwaax ah
Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa walxaha moodada sida boorsooyinka gacanta, kiisaska qalabka elektarooniga ah iyo kabaha.
Shayga MAYA .:S2482
MAGAC: JACQUARD CANVAS
DHISMAHA: 20 * 20 + 10 100 * 58
QAYBTA: 100% QAXO
Ballaar: 57/58 ”